Ireo singa 10 mahomby, mampiditra hafatra amin'ny mailaka | Martech Zone
Na dia nandroso kely aza ny mailaka tao anatin'izay folo taona lasa izay niaraka tamin'ny HTML, ny famolavolana mamaly, ary ny singa hafa, ny hery manosika ao ambadiky ny mailaka mahomby dia ny kopian'ny hafatra izay soratanao. Diso fanantenana matetika aho amin'ireo mailaka azoko avy amin'ireo orinasa izay tsy fantatro hoe iza izy ireo, ny antony nandefasan'izy ireo mailaka tamiko, na ny zavatra antenain'izy ireo hataoko manaraka… ary vokatr'izany dia nisoratra anarana haingana ho azy ireo aho rehefa nisoratra anarana. ho azy ireo.
Miara-miasa amin'ny mpanjifa aho izao hanoratra kopia ho an'ny mailaka mandeha ho azy… fampandrenesana famandrihana, mailaka tongasoa, mailaka an-tsambo, mailaka famerenana ny teny miafina, sns. Efa volana iray nanaovana fikarohana tamin'ny tranonkala io ary mino aho fa fa nahita takelaka ampy tamin'ny lahatsoratra mifaninana hafa aho mba hizara ny eritreritro sy ny zavatra hitako eto.
Niandry tamim-paharetana ahy ny mpanjifako hamita ity asa ity… mieritreritra aho fa hanokatra taratasy misy teny, hanoratra ny kopian'izy ireo, ary hanome azy ireo ho an'ny ekipany fampandrosoana hampidirina ao amin'ny sehatr'izy ireo. Tsy nisy izany satria ny singa rehetra dia tsy maintsy dinihina tsara ary mitaky fikarohana an-taonina. Ireo mpamandrika dia tsy manam-paharetana amin'izao fotoana izao ho an'ireo orinasa mandany fotoana amin'ny alàlan'ny fanosehana ireo fifandraisana tsy misy lanjany. Tiako ho azo antoka ny firafitray amin'ireto mailaka ireto fa tsy miova, voadinika tsara ary natao laharam-pahamehana.
Pejy fandraisana: Tsy hiresaka amin'ny layout, endrika, na koa aho Optimization eto… ity dia miavaka manokana amin'ny kopia soratanao ao amin'ny mailakao tsirairay.
Ireo singa mailaka mahomby amin'ny mailaka
Misy singa 10 lehibe hitako fa manoratra kopia mailaka mahomby. Mariho fa ny sasany amin'izy ireo dia tsy voatery, fa ny baiko dia mbola manakiana satria ny mpandefa mailaka dia mamaky amin'ny alàlan'ny mailaka. Te-hampihena ny halavan'ny mailaka ihany koa aho. Ny mailaka iray dia tokony ho lava araka izay ilaina mba hahatratrarana ny tanjon'ny serasera… tsy latsa-danja, tsy misy intsony. Midika izany raha toa ka mamerina ny teny miafina, ny mpampiasa dia te-hahafantatra fotsiny izay tokony hatao sy ny fomba hanaovana azy. Na izany aza, raha tantara mitantara mampiala voly dia mety ho tena mety tokoa ny teny an'arivony roa hampiala voly ny mpamandrika. Tsy mampaninona ireo mpamandrika ny mandroritra raha toa ka voasoratra tsara sy mizara ho an'ny scanning sy ny famakiana ny vaovao.
Lohahevitra lohahevitra - Ny laharanao ny lohahevitra no lafiny manakiana indrindra rehefa mamaritra raha hanokatra ny mailakao ny mpanjifa na tsia. Soso-kevitra vitsivitsy momba ny fanoratana andalana foto-kevitra mahomby:
Raha valiny mandeha ho azy ny mailakao (fandefasana, teny miafina, sns.), Lazao fotsiny izany. Ohatra: Ny fangatahanao hamerenana ny tenimiafinao amin'ny [sehatra].
Raha misy fampahalalana momba ny mailakao, mametraha fanontaniana iray, asio factoid, asio hatsikana, na ampio emoji hisarika ny sain'ny mailaka mihitsy aza. Ohatra: Fa maninona no tsy mahomby ny tetikasa fanovana dizitaly 85%?
Preheader - rafitra sy orinasa maro no tsy manome eritreritra firy ny lahatsoratra mialoha. Ity no lahatsoratra efa naseho naseho izay asehon'ny mpanjifa mailaka eo ambanin'ny laharan'ny foto-kevitrao. Izy ireo matetika no andalana vitsivitsy voalohany amin'ny atiny ao anaty mailaka, fa amin'ny HTML sy CSS dia azonao atao ny manamboatra ny lahatsoratra mialoha ary afeno ao anatin'ny vatan'ilay mailaka. Ny preheader dia ahafahanao manitatra ny lohahevitry ny lohahevitrao ary mahazo ny sain'ny mpamaky, manintona azy ireo hamaky ny mailaka iray manontolo. Ohatra. Manohy ny laharan'ny lohahevitra fanovana dizitaly etsy ambony, mety ho ny prémier, Ny fikarohana dia nanome ireto antony telo ireto momba ny antony tsy nahombiazan'ny tetikasa fanovana dizitaly tao anatin'ny orinasa.
fanokafana - Ny paragrafy fanokafana anao dia mety ho ny preheader anao na azonao atao ny manararaotra ilay toerana fanampiny hanampiana fiarahabana, hametraka tanteraka ny feony ary hampiorina ny tanjon'ny serasera. Ohatra: Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara fikarohana feno natao tao anatin'ny orinasa Fortune 500 izahay izay manondro ireo antony 3 mahazatra indrindra mahatonga ny tetikasa fanovana nomerika tsy hahomby ao anatin'ny orinasa.
fankasitrahana (tsy voatery) - Rehefa nametraka ny feony ianao dia azonao atao ny misaotra ny mpamaky. Ohatra: Amin'ny maha mpanjifa anay dia mino izahay fa tena zava-dehibe ny fizarana vaovao toy izao hanatsarana ny lanja entinay amin'ny fifandraisanay. Misaotra anao tamin'ny fanohanananao [orinasa].
Body - Hajao ny fotoana ampiasain'ny olona amin'ny alàlan'ny fanomezana fohy sy mamorona ny fampahalalana hahatratrarana ny tanjona nolazainao tetsy ambony. Ity misy toro-hevitra roa…
mampiasa pandrafetana kely sy mahomby. Mamaky mailaka betsaka amin'ny finday ny olona. Mety maniry ny hamakivaky ny mailaka aloha izy ireo ary hamaky lohateny, avy eo handavaka lalina kokoa ny atiny. Ny lohateny tsotra, ny teny sahisahy ary ny teboka bala dia tokony ho ampy hanampiana azy ireo hanao scan sy hifantoka amin'ilay kopia hitany fa mahaliana.
mampiasa sary kely sy mahomby. Ny sary dia manampy ny mpanjifa hahatakatra sy hitazona ny vaovao omenao haingana noho ny famakiana lahatsoratra. Eritrereto ny mijery tabilao mofomamy fa tsy mamaky ireo teboka sy soatoavina… mahomby kokoa ny tabilao. Ny sary dia tsy tokony ho fanelingelenana, na fanomezana maimaim-poana. Tsy te handany ny fotoanan'ny mpamaky izahay.
Hetsika na tolotra (tsy voatery) - Lazao amin'ny mpampiasa ny tokony hatao, ny antony hanaovana azy, ary ny fotoana hanaovana azy. Manoro hevitra anao aho hampiasa bokotra maromaro miaraka amina baiko eo amboniny. Ohatra: Raha mikasa ny tetik'asa fanovana nomerika manaraka ianao, manorata fivoriana fivoriana fanoloran-kevitra maimaimpoana izao. [Bokotra fandaharana]
Feedback (tsy voatery) - Mangataha ary manome fomba hanomezana hevitra. Mankasitraka ny mpihaino anao ny fihainoana anao ary mety hisy ny raharaham-barotra rehefa mangataka ny valinteniny ianao. Ohatra: Nahita an'ity fampahalalana ity ho sarobidy ve ianao? Misy lohahevitra hafa ve tadiavinao hikarohana sy hanome vaovao anay? Valio ity mailaka ity ary ampahafantaro anay!
Resources (tsy voatery) - manomeza fanampim-panazavana na fampahalalana hafa izay manohana ny fifandraisana. Ity fampahalalana ity dia tokony hifandraika amin'ny tanjon'ny serasera. Amin'ity tranga etsy ambony ity, mety ho fanampiny, lahatsoratra bilaogy mifandraika izay vitanao, lahatsoratra vitsivitsy vitsivitsy momba ny lohahevitra, na ireo loharano tena misy ao amin'ilay lahatsoratra.
Connect - Manome fomba fifandraisana (tranonkala, sosialy, adiresy, telefaona sns.). Ampahafantaro ny olona hoe aiza ary ahoana no ahafahan'izy ireo mifandray aminao na amin'ny orinasanao amin'ny media sosialy, ny bilaoginao, ny nomeraon-telefaonanao, na ny toerana misy anao aza.
fampahatsiahivana - Lazao amin'ny olona ny fomba nanaovany fisoratana anarana sy nanome fitaovana hivoahana na hanovana ny safidinao. Ho gaga ianao amin'ny isan'ny mailaka fidin'ny olona, ​​koa ampahatsiahivo azy ireo ny fomba nanampiana azy ireo tamin'ny lisitry ny mailakao! Ohatra: Amin'ny maha mpanjifanay anao dia tafiditra tao anatin'ireny buletin-taratasy ireny ianao. Raha te-hiala na hanavao ny safidinao ianao, tsindrio eto.
Ny tsy fitoviana dia zava-dehibe amin'ny rafitry ny mailakao sy ny kopiao, koa apetraho ny rafitra ho an'ny mailakao tsirairay mba hahafantaran'ny mpamandrika sy hankafizany ny tsirairay. Rehefa mametraka ny antenainao ianao ary mihoatra ny azy ireo aza dia hisokatra, potsitra, ary handray andraikitra bebe kokoa ny mpamandrika. Izany dia hitarika amin'ny fifamatorana, ny fahazoana ary ny fitazonana tsara kokoa ny mpanjifanao.
Tags: mailakavatan'ny mailakaantso an-tariby amin'ny mailakamailaka kopiafanoratana mailakamailaka ctafandraisana an-tanana amin'ny mailakamailaka footerfandefasana mailakasary mailakalohateny mailakamailaka Marketingfanokafana mailakavaliny mailakafitazonana ny mailakafiarahabana mailakafizarana mailakatsipika momba ny mailakapreheader